विकास निर्माणमा प्राथमिकता दिएका छौँ : अध्यक्ष थापा - Dhading Sanchar
विकास निर्माणमा प्राथमिकता दिएका छौँ : अध्यक्ष थापा
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु कुमार थापाले आफु जनताको सेवाको लागि चौबिसै घण्टा खटिने बताउनु भएको छ । गाउँपालिकाका विकासको लागि आफु क्रियाशील रहेको समेत बताउनु भएको छ । आफुले निर्वाचनको क्रममा बोलेको कुराहरुलाई गर्दै गएका छौ कि फेरबदल गरेका छैनौँ । चुनावताका आफूले गरेका वाचाहरू कति पूरा भए, कति पूरा गर्ने सम्भावना छ, हालसम्म जनताले के कति परिवर्तनको महसुस गरे भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु कुमार थापासँग धादिङ सञ्चार प्रा.लीले गरेको गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
१. दिनहरु कसरी बितिरहेका छन् ?
त्यस्तो धेरै व्यस्त छैन अरु विकास निर्माणका कामहरु सुरुवात् भएका छैनन् ।
२.पहिले सल्यान्टार पुग्न ५/६ घण्टा लाग्थ्यो अब त त्यस्तो समय नलाग्ने रहेछ नि ?
अहिले त्यस्तो समय लाग्दैन एक घण्टामा हामी सजिलै पुग्न सक्छौ ।
३. ४ वर्ष शिक्षक पेशामा वस्नु भयो अहिले राजनितिमा लाग्दा कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ ?
म २०५० साल जेष्ठ बाट शिक्षण पेशामा आवद्ध भए । महिले २०५४ साल र्बैशाख २८ गते राजिनामा दिए र २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा मुलपानी गाउँ विकास समिति बाट अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए । निरन्तर त्यो ५ वर्ष सम्म आफु अध्यक्ष भएर काम गर्दै आए । त्यो ५ वर्ष पछि पनि स्थानीय तह खालि रह्यो निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन । जसले गर्दा त्यो अध्यक्षको भुमिका निरन्तर अर्को निर्वाचन नभए सम्म पुरा गर्नु पर्ने भयो । त्यसपछि प्रत्येक सुमदायहरु सँग भेटघाट हुने सँगै पार्टीका नितिहरु पनि पुरा गर्नु पर्ने भएकोले त्यस्तो अनुभव भएन ।
४.जनताको जनमत त तपाई प्रति धेरै रहेछ नि ?
मुल त पहिलाको संरचनालाई हेर्ने हो भने बुढाथुम, बसेरी, फुलखर्क र मुलपानी ३ नं ईलाका भित्र पथ्र्यो । ४ नं ईलाकामा अहिले सल्यान्टार, आगिन्चोक, सल्यानकोट र त्रिपुरेश्वर थियो । त्यो चार वटा गा.वि.स मध्येमा २०४९ सालमा नेकपा एमालेले त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका जितेको थियो । २०५४ सालमा आँउदा सल्यान्टार, आगिन्चोक र सल्यानकोट नेपालि कांग्रेसले निर्वाचन जितेको थियो । त्यही समय देखि नै अलि संगठनका हिसावले संगठन निर्माण गर्ने अवस्था थिएन । जसले गर्दा कतिपय समयमा नयाँ संरचना बन्दा केहि कमजोरी भएको थियो । त्यो समयमा मैले आफ्नो गाउँ नछाडी धेरैलाई सहयोग गरेको थिए साथै पहिला नै धेरैले चिनेको कारणले पनि हुन सक्छ ।
५.अब विकासको हिसावले कुरा गर्दा गत आर्थिक वर्षको आधारमा हेर्दा विकास निर्माण कुराहरुलाई कसरी बुझ्नु भएको छ ?
जब स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्पन्न भयो निर्वाचन सम्पन्न भएको पहिलो वर्ष हामीले कतिपय नियम कानुनका कुराहरु नयाँ के हुने हो, हामीले पुरानो नियम कानुनहरुलाई अवलम्बन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने खालका कुराहरुमा हामी अन्यौल्तामा थियाँै । विस्तारै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । केहि सय सम्म संस्थागत रुपमा सबै ठाउँमा कार्यलय नभएको, बस्ने कुर्सीहरु नभएको जस्ता हरेक अवस्थाहरु बाट सिर्जना भएर आएको गाउँपालिकाकै केन्द्र नभईरहेको बेला सम्म पनि वडा सम्म सेवा दिने कुराहरु जटिल रहेको कुराहरुलाई हामीले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सुरुमा जटिलता त रहेको थियो ।
पछिल्लो चरणमा हामीले त्यसलाई नियम कानुनको परिधि भित्र बसेर त्यसको व्यवस्थापन र उचित कार्यन्वयन गर्ने कुराहरुमा हामी द्धत्तचित्त भएर लागेका छौँ । विगतका वर्षलाई हामीले समिक्षा गरेर जाने हो भने हामीले केहि पूर्वाधारहरुसँग पनि लक्षित कामहरु गरेका छौँ । अहिले हाम्रो गाउँपालिका भित्र ३९ किलोमिटर चक्रपथ निर्माण भएको छ । त्यसको पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यो वर्ष बाट हाम्रो ७ वटै वडा कार्यलयमा सर्वयानि सडक बनाउने भनेर लागेका छौँ ,हामी त्यस्तो योजना बनाएर लागेका छौँ । सडकमा हामीले एउटा ठुलोबेसी बाट मुलपानी मुलचोक जाने सडक अर्को सिकाटार भएर आगिन्चोक, गेलुङ गढगडे भएर सुकभन्ज्याङ भएर गंगाजमुना जाने सडक, त्यस्तै गरि टारीबेसी खहरे भएर रिङ्गेको हाईड्रोपावर भएर गलुङ भन्ज्याङ भएर जाने सडक छ । अर्को गणेश थान भएर त्रिपुरा सुन्दरीको मन्दिर नजिक बाट बेलुङ भञ्ज्याङ जाने एउटा छ भने अर्को मगर डाँडा, गोलाङ, आगिन्चोक, सुनपोखरी सडकहरु हामीले स्तरोउन्नती गर्ने छौँ । अब हामीले यी सडकहरुलाई स्तरोउन्नती गर्ने अब नयाँ सडक नबनाउने बन्ने योजनामा छौँ ।
६. सम्भवत यी चार पाँच वटा सडकहरु स्तरोउन्नती गर्ने हो भने सबै समेट्छ त ?
हाम्रो ७ वटै वडामा सडकको पहुँच पुग्छ । काठमाण्डौँ बाट सिधै बस जाने सडकहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ । अहिले टारीबेसी बाट सल्यान्टारका लागि विस्तारै सडक कालोपत्रे गर्न लागेका छौँ । हामीले सडकका गुरु योजनाहरु बनाएका छौँ । त्यसको एउटा डि.पि.आर तयार गरेका छौँ । यसै वर्ष हामीले केहि सडकहरु मर्मत गर्नु पर्ने र अहिले नियमित सल्यान्टार भरि माईक्रो चल्छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र कालोपत्रे गर्न योजना बनाएर सुरुवात् गर्न लागिरहेका छौँ ।
७. तपाईको पालामा ती सडकहरु ग्रावेल हुन्छ कि कालोपत्रे हुन्छ ?
कालोपत्रे सुरुवात् हुन्छ ग्रावेल मुख्य बाटोहरु भनेका छन् ती सम्पन्न हुन्छ ।
८. अब खानेपानीको कुरा गरौं खानेपानीको समस्याहरु के कस्तो रहेको छ ?
हामी निर्वाचित भएर आँउदा सबै भन्दा मुख्य समस्या रहेको खानेपानी हो । सल्यान्टार खानेपानीको समस्या भएको पहिला देखि नै हो । हामी निर्वाचित हुदै गर्दा पनि धेरै खानेपानीको कुराहरु उठेका थिए । विस्तारै त्यसलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पहिलो हाम्रो कार्यपालिकाको बैठकले पनि मन्ताङ खोलाबाट पानी ल्याउने कुरा भएर अहिले डि.पि.आर हुदैँछ । अब केहि दिनमा नै मुहानबाट पाईप संचालन गर्ने काम हुन्छ । अहिले पनि हामी सँग ३ करोड रुपैँया त्यो योजनालाई प्राप्त भईसकेको छ । सल्यान्टारमा हामीले अहिले डिपबोरिङ संचालन गरेका थियौँ । अहिले हामीले घर–घरमा धारा वितरण गरिसकेका छौँ । अहिले खानेपानीको बारेमा त्यस्तो केहि समस्याहरु देखिएको छैन । सल्यान्टारमा वसोवास अव्यवस्थित रहेको छ । त्यसले गर्दा पनि खानेपानीको पाईप विच्छ्याउने काममा केहि समस्या भएको थियो ।
९.अहिले पानी खान पाए पछि त्यहाँका नागरिकहरुले के भन्नु हुन्छ ?
नागरिकहरु खुशि हुनुहुन्छ । खानेपानीको कुरामा राम्रो भयो । प्रत्येक घर धुरीले घरमै धारा चाहियो भनेर भन्नु भएको छ, पाईपहरु जोड्ने कामहरु नियमित भईरहेको छ । अन्यत्र पनि हामीले खानेपानीको समस्या नल्याउन वडा नं ४ मा धेरै घरमा एक घर एक धारा भईसकेको छ । वडा नं ३ को ठुलोबेसी लगाएत धेरै घरहरुमा एक घर एक धारा पानी वितरणको कामहरु भईसकेको छ । यसपालि हामीले परिक्षणको लागि सल्यान्कोटको मन्दिर आसपास र कार्की गाउँ पटि पनि एउटा डिपबोपिरङ परिक्षण गर्ने भनेर कार्यक्रमहरु राखेका छौँ । पहिलाको जस्तो खानेपानीको समस्या छैन ।
१०.तपाईको कार्यकाल भित्रमा खानेपानी पु¥र्याउनु हुनेछ ?
हामीले विभिन्न वैकल्पिक स्रोतहरु खोजी गरेर अथवा भईरहेका स्रोतहरुलाई व्यवस्थापन गरेर हामीले प्रत्येक घरमा धारा दिने छौँ ।त्यसकारणले खानेपानीको त्यस्तो समस्या हुदैँन । पाईप लाईनको क्रममा केहि समस्याहरु आएका छन् । त्यसलाई पनि हामीले व्यवस्थित गर्ने छौँ ।
११. स्वास्थ्यका विषयमा कुरा गर्दा नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य सुविधा के कस्तो छ ?
पहिलो चरणमा हामी निर्वाचित भईसकेपछि स्वास्थ्यमा केहि सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हिसावले हाम्रो सल्यान्टारमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई व्यवस्थित गरौँ भनेर ठेकेदारहरुलाई प्रेसर ग¥यौ । भवन राम्रो सँग सम्पन्न भईसकेको थिएन केहि कुराहरु हामीले गरेर त्यो भवन सम्पन्न ग¥यौ । भवन बनाउने जग्गा खरिद गर्ने कुराहरुमा पनि केहि रकमहरु भुक्तानी दिन बाँकी रहेको,७ लाख भन्दा बढि विद्युत महशुल तिर्न बाँकी रहेको त्यो तिरेर अहिले हामीले १५ बेडको अस्पताल संचालन गरिरहेका छौँ । हामीले सबै खालका व्यवस्थापन गरिरहेका छाँै । हामीलाई अहिले औषधिका पनि केहि समस्याहरु रहेको छैन । स्वास्थ्य संस्था हाम्रो वडा नं १ मा थिएन अहिले हामीले आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापन गरेका छौँ । स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य सेवाहरु हामीले वडा बाटनै संचालन गर्ने गर्छौ । अहिले धेरै विरामीहरु चेकजाँचको लागि आउने गरेका छन् ।
१२. अब त्रिपुरासुन्दरीका नागरिकहरु स्वास्थ्य उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था आँउदैन ?
हामी त्यसमा प्रतिबद्ध भएर लागिरहेका छौँ । हामी सँग सबै किसिमका डाक्टरहरु रहनुभएको छ । अहिले समायोजनले केहि तितरवितर बनाईरहेको छ । त्यस्तो अहिले केहि समस्याहरु छैन ।
१३.कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्न के गर्नुपर्ला ? पढेपछि कृषि गर्नु हुदैँन जागिर खानुपर्छ भन्ने मान्यता छ त्यसमा गाउँपालिकाले के गरिरहेको छ ?
व्यवसायिक भएर खेती गर्ने समुुदाय धेरै कम पाईन्छ । अहिलेका नयाँ पुस्ताले खेती बाट खासै प्रगति हुदैँन । अहिले मुलत युवाहरुले व्यवसायिक कृषिहरु संचालन गर्दै आएको पाईन्छ । त्यसको लागि हाीले अनुदानको पनि व्यवस्था गरेका छौँ । राम्रो काम गर्नेहरुलाई हाम्रो तर्फ बाट सहयोग गर्ने नियम पनि बनाएका छौँ । हामीले विगतका वर्षमा पनि युवाहरुलाई ग्रिल सम्बन्धी तालिम दिएका छौँ । गाउँपालिकाले यसमा पनि सहयोग गर्दै आएको छ । पानीका ट्याङकि पु¥र्याउने कुराहरुमा उहाँहरुको लक्ष्य अनुसारका काम गरिदिनुपर्छ भनेर लागेका छौँ ।
१४. सेवा प्रवाहमा समस्याहरु के–कस्तो आउने गर्छन् ?
सुरुको अवस्थामा बैंङक नहँुदा समस्या देखिएको थियो । अहिले त्यस्तो केहि समस्याहरु देखिएको छैन । हामीले गर्ने कामहरु नियमित चलेको छ, त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न पनि सजिलो भएको छ । कतिपय कुराहरु समुदाय बाट आँउछ समस्याहरु आँउछ त्यसलाई सहज ढङगबाट व्यवस्थापन गर्नको लागि योजना बनाउछौँ । कार्यन्वयनको कुरामा त्यत्ति धेरै समस्याहरु छैन ।
१५. यो आर्थिक वर्षमा भन्नुपर्दा बजेट के–कति छ्ट्याईएको छ ?
हाम्रो गाउँपालिकाको जम्मा बजेट भनेको ४६ करोड ४७ लाख रुपैँया रहेको छ । त्यसलाई हामीले ६ करोडको हारा हारीमा बजेट चालु तर्फ नै रहने गर्छ । अरु बजेटहरुलाई हामीले व्यवस्थित गर्ने कामहरुमा हामीले शिर्षक छोएका छौँ । यसपालि हाम्रो गाउँपालिका भित्र प्रदेश स्तरीय रंगशाला निर्माण गर्दै छौँ,त्यसमा अलि बढि बजेट लगानी गर्नु पर्ने देखिएको छ । त्यसै गरि हामीले सडकलाई निरन्तरता दिनको लागि योजना बनाउन प¥यो भनेर पैशा राम्रो सँग विनियोजन गरेका छौँ । त्यस्तैगरि सल्यान्टार लगाएत अन्य स्वास्थ्य संस्था गाउँपालिका भित्र रहेका मन्दिरहरु केहि महत्वपुर्ण स्थानहरुमा सडक बत्तिहरु राख्ने भन्ने योजना बनाएका छौँ । अर्को हामीकहाँ लाईनको फोन व्यवस्थापन हामीले विगतको वर्षमा लैजान सफल भएका छाँै । हामीले हाम्रो गाउँपालिकालाई काठे पोल मुक्त बनाउन लागिरहेका छौँ । भुकम्प पछि घर निर्माण गर्दा छुटपुट भएको हुनाले केहि ठाउँमा छुटपुट रहेको छ नत्र अरु सबैमा पु¥र्याएका छौँ । हामीले सबै घरधुरीमा केन्द्रिय विद्युत लाईन पु¥र्याएका छौँ । त्यस्तैगरि अन्यत्रलाई पनि हामीले खानेपानी लगाएत विद्युत सडकको क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेका छौँ । यसरी नागरिकहरुलाई के गरेर सेवा पु¥र्याउन सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौँ ।
१६.हामीले आफुले निर्वाचनको क्रममा बोलेको कुराहरुलाई गर्दै गएका छौ कि फेरबदल गरेका छौँ ?
हामीले फेरबदल गरेका छैनौँ । हामीले शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा कतिपय विद्यालयहरुलाई मर्ज पनि गरेका छौँ । विद्यालय बन्ने कुरामा हाम्रो गाउँपालिका भित्रमा दुई वटा विद्यालयहरु बाहेक अरु सबै सम्पन्न हुने छ । यो वर्ष पनि हामीले सबै विद्यालयहरुमा कम्प्युटरहरुको व्यवस्था गर्ने छौँ । अरु मा.वि स्तरका विद्यालयहरुमा नेट पनि जोडेका छौँ । शौचालयहरु, पुस्तकालयहरु तयार गर्ने भनेर लागिरहेका छौँ । हामीले यो वर्ष पनि १ करोड २० लाख खर्च गरेका छौँ । त्यस्तैगरि हामीले सबै भन्दा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालयलाई सम्मान पनि गर्ने छौँ । यसरी विद्यालयहरुलाई के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर हामीले त्यसको बारेमा योजनाहरु बनाएर लागि रहेका छाँै ।
१७.धार्मिक आस्थाको केन्द्र त्रिपुरासुन्दरी मन्दिरलाई पर्यटन सँग जोड्न गाउँपालिकाले के गर्नुपर्छ ?
सुरु देखि नै हामीले पालिकाको गौरवको विषयमा त्रिपुरासुन्दरीको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा लागेका छौँ,मन्दिर बनेको छ । हामीले मास्टर प्लान बनाएर त्यो मन्दिरको क्षेत्र भित्र पार्किङ कस्तो बनाउने, खानेपानीको व्यवस्थापन कसरी हुन सक्छ भन्नेर हामीले ६२ लाख रुपँैया लाग्ने भएर एउटा मास्टर प्लानको आधारमा मन्दिरलाई कसरी बनाएर लैजाने भनेर लागेका छौँ । त्यस्तै तल बेसीमा रहेको मन्दिरलाई भुकम्प पछि डुवानमा रहेको छ त्यसलाई के गर्ने भन्ने कुरामा हामी अन्यौलमा छौँ । हामीले अहिले एउटा होमस्टे बनाउने कुरामा छाँै ।
१८. अन्त्यमा के भन्न चाहानुहुन्छ ?
मलाई त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको बारेमा जानकारी दिने अवसर दिनु भयो त्यसको लागि निलकण्ठ एफ.एम.सम्पुर्ण परिवारलाई धन्यवाद ।
जनता सँग मेयर रेडियो कार्यक्रमको सम्पादित अंश
अवको राजनैतिक बैकल्पिक शक्ति भनेको समाजवादी पार्टी नै हो :अर्जुन सापकोटा
हाम्रै पालामा राजमार्ग क्षेत्रमा शितलचिनी रोपेर हरियाली बनाउछौँः अभियन्ता रुपाखेती